Manazava ny fomba hanesorana ireo data ilaina amin'ny habaka HTML
Maro ny fampahalalana voatolotra ao amin'ny harato no heverina ho "tsy voarindra" satria Tsy voalamina tsara izany. Ny tranonkala HTML dia samy hafa amin'ny fomba ahitàna rakitra voalamina, ary ny lahatsoratra hita ao anatin'ireo tahirin-kevitra dia voarakitra ao anatin'ny code HTML fototra.
Misy fomba telo fanangonana tahirin-kevitra lehibe indrindra avy amin'ny vohikala HTML:
Mamonjy ny lahatsoratra hita ao amin'ny pejy Internet amin'ny solosainao;
Manoratra ny fehezan-dalàna momba ny fitrandrahana angon-drakitra;
Fampiasana fitaovana famonoana manokana;
. Ahoana no hamokarana HTML avy amin'ny tranonkala tsy misy kodia
Azonao atao manaparitaka votoaty iray votoaty amin'ny fampiasana ireo dingana voalaza etsy ambany:
Aorian'ny fisokafan'ny tranonkala misy ny lahatsoratra tianao, dia tsindrio havanana ary mifidiana ny safidin'ny "Save Page As," na "Save As". Ampidiro anarana ny rakitra ao amin'ny sahan-drakitra "Filamatry" ary avy amin'ny "Drop As As Type" menamena ny safidy, "Kitiho ny tranonkala, HTML fotsiny. "Tsindrio ny bokotra" Save "ary miandry segondra vitsivitsy.
Ny lahatsoratra rehetra ao amin'io pejy io dia voatahiry sy voavonjy ho tahiry HTML. Ny safidin-tranonkala natokana ho an'ny pejy dia tsy mitongilana, ary afaka manitsy ny votoatin'ny tonian-dahatsoratra toy ny Notepad ianao.
Fanampiana tranonkala iray manontolo
Safidio ny safidin'ny "Save as" na "Save Page As" ao amin'ny menu "Fichier". Avy eo, tsindrio ny "Web Page, Complete" ao amin'ny menu "Save As Type". Rehefa avy mikendry "Save," ny lahatsoratra sy ny sary dia hivoaka avy ao amin'ny pejy ary ho voavonjy na aiza na aiza tianao. Ny lahatsoratra dia napetraka anaty tahiry HTML raha tahirizina ao anaty ordinatera ny sary.
2. Fitaovana HTML avy amin'ny tranonkala mampiasa coding
Afaka miasa amin'ny dossier HTML ianao mampiasa fitaovana manokana. Azonao atao ihany koa ny mamorona fehezan-dàlana hamafa ny tenifototra HTML rehetra ary mitazona ny lahatsoratra hita ao anaty rakitra HTML mampiasa XPath na fanehoana matetika. Ny sasany amin'ny teny fandaharana be mpampiasa indrindra amin'ity asa ity dia ahitana Python, Java, JS, Go, PHP ary NodeJs.
3. Amin'ny fampiasana fitaovam-pandraketam-pejin-tranonkala
raha te-hanangona rakitra HTML avy amin'ny tranonkala iray ianao nefa tsy manoratra fehezan-tsoratra tokana na misoroka ny fampijaliana ny fomba kopia sy fandefasana, ampiasao . Raha ny marina dia maro ireo fitaovana mahasoa izay afaka manangona ny vaovao ilaina avy amin'ny tranonkala iray ary avy eo dia mamadika azy io ho toy ny rafitra natsangana. Manandramana fitaovana fanariana vitsivitsy vitsivitsy , ary hahita tsara ilay iray izay tena mety indrindra amin'ny fikarakaranao Source .